उपत्यकाका ४०८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, देशभर कति ? - Arthasansar
उपत्यकाका ४०८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, देशभर कति ?
शनिबार, २० भदौ २०७७, १६ : २० मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा थप एक हजार ४१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएकाे छ । याे सँगै नेपालमा काेराेना भाइरसबाट संक्रमण हुनेकाे संख्या ४५ हजार २ सय ७७ जना पुगेकाे छ ।
मन्त्रालयद्वारा आज आयोजना गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गाैतमले पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएकाे परीक्षणमा थप १ हजार ४१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका हुन् । जसमध्ये ३ सय ४९ जना महिला र ६ सय ९२ जना पुरूष रहेका छन् ।
शनिबार काठमाडौंका ३ सय २६ जना, भक्तपुरका ४५ जना र ललितपुरका ३७ जना गरी उपत्यकाका ४ सय ८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।